Saturday April 28, 2018 - 09:02:31 in Wararka by Super Admin
Muxamed Saalax Kashqari oo kamid ah culimada muslimiinta Turkistaanta bari ayaa ku geeriyooday xabsi ay maamusho dowladda shuuciyadda Shiinaha.
Caalimkan muslimka ah oo dhowr bilood kahor ay gacanta ku dhigeen ciidamada Booliiska Shiinaha ayaan la ogeyn sababaha rasmiga ah ee geeridiisa keentay, waxaana loo badinayaa inuu tacdiib iyo jirdil kula kulmay gudaha xabsiga uu ku jiray.
Kumanaan ruux oo muslimiin ah oo u badan dadka kasoo jeeda Turkistaanta bari, kuna sugan Turkiga ayaa salaadda Janaazatul qaa’ib kula tukaday Sheekha masjid Al-faatix ee magaalada Istanbuul ee wadanka Turkiga.
Maalmihii lasoo dhaafay waxay Muslimiinta Reer Ayqoor eek u nool Turkiga ay wadeen banaanbaxyo ay ku dalbanayeen in lagu sii daayo Sheekh Muxamed Saalax Kashqari iyo dhamaan maxaabiista kale ee ku jira gacanta dowladda Shiinaha.
Sheekh Maxamed Maxmuud oo xubin ka ah Jamciyadda Culimada Muslimiinta ee Turkistaanta bari, kuna sugan Turkiga ayaa mar uu u waramayay warbaahinta ayaa shaaca ka qaaday in xaaladaha muslimiinta Ayghoor ay kasii dareysay tan iyo sanadkii 2014-ta.
Xaaladda ay ku noolyihiin Muslimiinta Turkistaanta bari ma ahan mid laga sheekeyn karo , waxaa gebi ahaanba mamnuuc ka ah iney si muuqata u gutaan shacaa’irta diinta islaamka, si qasab ah ayaana lagu afuriyaa marka la gaaro bisha Ramadaan.
Turkistaanta bari waxay kamid tahay dhulalka muslimiinta ee ugu ballaaran, laguna dhibaateeyo muslimiinta, waxaana masaaxo ahaan lagu qiyaasaa 1.8 milyuun oo km labo jibaaran.
Turkistaanta bari waxaa wuqooyi galbeed ka xiga wadamada Kazakhistaan, Qiir-qiizstaan, iyo Dhaajakistaan, koonfurna waxaa ka xiga Afqaanistaan iyo Pakistaan.
Dadka ku nool Turkistaanta bari waxaa lagu qiyaasaa cadad ahaan iney gaarayaan illaa 25 milyan oo ruux, waxaana muslimiinta dega ay ka koobanyihiin isiro kala duwan, sida Ayghoor, Turkumaan, Dhaajiik, iyo qowmiyado kaloo aad u farabadan, oo dhamaantooda ah dad muslimiin ah.